champa88 - Viewing Profile - iChautari
Member Since 1506051799
Last Active 1519153833
Dear friends, must watch video based on facts by our youths Posted 1519153932 in the Guffgaff - General Discussion category
राष्ट्रपति Trump को नयाँ अप्रबशी नीतिको खाका Posted 1515551957 in the Guffgaff - General Discussion category
साताको राशिफल - मेरो त यो साता राम्रै रहेछ तपाईको नि ? Posted 1513074453 in the Guffgaff - General Discussion category
रोकिएका धेरै काम बन्नेछन्। मिहिनेतले आम्दानीको दिगो स्रोत जुटाउन सफल भइनेछ। सप्ताहान्तमा स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनुहोला। समयमा आँट गर्न नसक्दा काममा केही चुनौती देखा पर्नेछन्। पठनपाठनमा त्यति ध्यान दिन नसकिएला। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ। सोमवारदेखि स्थिति अनुकूल बन्नुका साथै प्रयत्न गर्दा लक्ष्य पूरा हुनेछ। प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई तह लगाउन सकिनेछ। व्यापारमा फाइदा होला। कामले अरूलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ। अप्ठ्यारा चुनौतीहरूलाई पन्छाउने समय छ।
आँटेको काम रोकिनाले पछि परिनेछ। तापनि बुधवारदेखि पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिनेछ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ भने आर्थिक पक्ष सबल बन्नेछ। चुनौतीहरू पार लाग्नेछन्। बुद्धिको उपयोगले गुमेको प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। प्रारम्भमा घरेलु समस्या देखापर्न सक्छन्। बेसुरमा वचन दिने बानीले काममा समस्या उत्पन्न होला। विश्वासपात्रबाटै धोका हुने सम्भावना देखिएकाले सजग रहनुपर्ला। पेटको खराबीले पनि सताउन सक्छ। पढाइलेखाइमा ध्यान दिन नसकिएला।
आँट गर्न नसक्दा काममा पछि परिनेछ। अप्रिय समाचारले मन भारी हुनेछ। तापनि सप्ताहान्त अनुकूल देखिन्छ। मिहिनेत गर्दा पहिलेका कमजोरीमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। रोकिएको काम बन्नुका साथै नयाँ काम सुरु हुनेछ। अवसरले उत्साह जगाउनेछ। सुखदुःखमा साथ दिनेहरू भेटिनेछन्। तर सोमवारदेखि पारिवारिक असमझदारीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। अरूको भर पर्दा महत्वाकांक्षा अधुरो रहनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले सताउनेछन्। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले अध्ययनमा मन एकाग्र नहुन सक्छ।
बुधवारपछि पारिवारिक असमझदारीले काममा बाधा होला। अरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन्। बुद्धिको उपयोगले काम लिने कोसिस गर्नुहोला। अध्ययनमा समय दिन नसकिएला। पहिलेको सम्झौताले समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। कुरा लगाउनेहरूबाट पनि सजग रहनुपर्ला। सोमवार र मंगलवार स्थितिमा सुधार आउनुका साथै चिताएका काम सम्पादन गर्न सफल भइनेछ। सहयोगीहरूले मनग्गे फाइदा दिलाउनेछन्। मिहिनेतले अवसर दिलाउनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्।
मिहिनेतले गुमेको प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। पहिलेको समस्या पनि सुल्झनेछ। सप्ताहान्तमा विगतका कमजोरी बाहिर आउनाले केही समस्यामा परिने सम्भावना छ। प्रारम्भमा रमाइलो पारिवारिक जमघटका बीच स्वादिष्ट खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ। तर स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ भने परिस्थिति अलि असहज हुन सक्छ। फजुल खर्च बढ्नुका साथै वादविवादमा परिने सम्भावना छ। अवसर प्राप्त भए पनि आफ्नैले काम बिगार्न सक्छन्। तापनि, बुधवारपछि शुभचिन्तकहरू जुट्नाले स्थितिमा सुधार आउनेछ।
आलोचकहरूले छिद्र खोतल्ने हुँदा गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दा दु:ख पाइनेछ। सप्ताहान्तमा सहयोगीहरू जुट्नाले मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। प्रारम्भमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभावले सताउन सक्छ। काम बिग्रने भयले पनि सताउनेछ। सोमवार र मंगलवार भने स्थिति अनुकूल बन्नाले विभिन्न अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् भने मिहिनेत गर्दा आँटेको काम बन्नेछ। बुधवारदेखि सहयोग जुटाउँदैमा समय व्यतीत हुनेछ।
विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग निकटता बढ्न सक्छ। रमाइलो जमघटमा सहभागी भइनेछ। सप्ताहान्तमा भने विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रारम्भमा विशेष अवसर जुट्नुका साथै मनग्गे आम्दानी हातलागी हुनेछ। पछिसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। तर, सोमवार र मंगलवार केही अनियन्त्रित खर्च पनि हुनेछ। अर्थ अभावले चिताएको काममा बाधा पुग्नेछ। तर टाढाका साथीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिनेछ। बुधवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले प्रतिष्ठित कामको अवसर प्राप्त हुनेछ।
लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ। आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन् भने मनग्गे धन संग्रह हुनेछ। पछिसम्म फाइदा हुने काम सुरु गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। बुध, बिही र शुक्रवार भने फजुल खर्च बढ्न सक्छ। समयमा होसियार नबन्दा काममा बाधा पुग्नेछ। तापनि खर्च गर्दा लामो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ।
कीर्तिमानी काम गर्ने अवसर जुट्नुका साथै आम्दानीसमेत बढ्नेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। सप्ताहान्तमा अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। फजुल खर्च पनि बढ्न सक्छ। सुरुमा अस्वस्थताका बीच कामको जिम्मेवारी बढ्न सक्छ। काममा बाधा र चुनौती देखिनेछन्। अरूको स्वार्थमा उपयोग भइनेछ, सजग रहनुहोला। सोमवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनुका साथै राजनीति र नोकरीमा प्रसिद्धि बढ्नेछ। व्यवसायबाट सोचेको लाभ मिल्नेछ। अरूको मन जितेर लाभ उठाउन सकिनेछ।
प्मित्रहरूको सञ्जाल फराकिलो हुनुका साथै कीर्तिमानी काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। नियमित काम बन्नाले मनग्गे आम्दानी हुनेछ।रारम्भमा अवसरका लागि चुनौतीसँग लड्नुपर्ला। अस्वस्थताबीच कामको बोझ थपिन सक्छ। नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। ईर्ष्या गर्नेहरू बढ्नेछन् भने काम गरेर पनि जस नपाइने समय छ। अरूका लागि समय खर्चनुपर्ला। बुधवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले धेरै समस्या समाधान हुनेछन्। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ भने मिहिनेत गर्दा चिताएको काम बन्नेछ।
स्वास्थ्यमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। अर्थ अभावले आँटेको काम समयमा सम्पादन गर्न नसकिएला। सप्ताहान्तमा काम बन्नाले नाम, दाम र इनाम प्राप्त हुन सक्छ। रियजनसँगको भेटघाटले सुरुआत रमाइलो रहनेछ। लगनशीलताले राम्रै फाइदा दिलाउनेछ। विशेष उपहार प्राप्त हुने समय छ। रमाइलो यात्राका बीच आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला। तर सोमवारदेखि अस्वस्थता र व्यावहारिक झमेला समेत आइलाग्न सक्छ। आकस्मिक खर्च बढ्नेछ भने विरोधीहरू बढ्नाले काममा चुनौती देखापर्न सक्छ।
दाम्पत्यमा पनि असमझदारी बढ्न सक्छ। भैपरी आउने समस्याले सताउनेछ भने परिबन्धले पनि केही झमेला निम्त्याउन सक्छ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ। आँटले काम बन्नेछन् भने मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि हिम्मतले काम लिँदा लाभ मिल्नेछ। पुरुषार्थी काम बन्नाले जोश–जाँगर पनि बढ्नेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक भेटघाटले मन प्रफुल्लित हुनेछ। बुधवारपछि काम, दाम र स्वास्थ्यमा बाधा हुने देखिन्छ।
Heart attack - How to protect yourself when symtoms arises-Video Posted 1512009116 in the Health & Beauty category
Note to Admin Posted 1509924072 in the Guffgaff - General Discussion category
What happened to the audio player? I don't see the player any more. How can I browse past episode?
महिनावारीमा धेरै रक्त श्राब भयो भने के गर्ने ? घरेलु उपाय Posted 1509509844 in the Health & Beauty category
कविता Posted 1508221154 in the साहित्य / श्रीजना category
Dollar आउछ जान्छ मात्र । सधै हात लागि सुन्ना , अब dollar बाद्ने यन्त्र खोज्दै छु । राम्रो कविता । दारी चैन हो बा lol ।
राकेस काफ्लेको मृत्युको हल्ला Posted 1507980845 in the Guffgaff - General Discussion category
October १० को उनको Facebook account को status
Bhutanese Community In Iowa(BCI)
U will find my dead body in grace lake park..
Sorry my family,relatives n all my well wisher......byee
मेरी तुलसा र छोरोले मेरो लास पनि नछुन्न..
राकेस काफ्ले के साँचै हामी बाट सदाका लागि बिदा भएकै हुन त ? यदि यो साँचो हो भने, उनको व्यक्तिगत गुड र सिर्जनालाइ अलग्गै राखेर हेर्न हो भने, एउटा सृजनसिल युवाको दुखद अवसान भएको छ । Can anybody confirm this ?
कस्तो केटिले धोका दिदैनन् ? Posted 1507083525 in the Guffgaff - General Discussion category
ali ali ta mai sanga po match kahyo bai, lol
के छ हो सोल्टीहरु ? Posted 1506833462 in the Guffgaff - General Discussion category
हैन हो सोल्टीहरु कता हरायो हो ? सबै निदाकै हो त ? चम्पा संग कुरा गर्न कतिलाई मन छ? लौ हेरौ त सोल्टीहरुको आँट ।
You need to register to send meamessage. You can also safely register using your Facebook login. Come on guys badly needing somebody to have great time.
नेपाली केटा संगै घरजम गर्ने हो , यहाँका खैरेको के भर । लौ है सोल्टीहरु I am waiting for you.
Buddha Lama is for sure 1st Nepali Idol Posted 1506120694 in the Guffgaff - General Discussion category
Dream come true. Congratulation Buddha Lama for winning 1st Nepal idol. Good luck.
Buddha Lama is for sure 1st Nepali Idol Posted 1506052772 in the Guffgaff - General Discussion category
I support Buddha lama. He deserves 1st Nepal idol. His unique voice always fascinates music lover. He can do much for Nepali music Industry. I voted for him. Hope you voted too. Best of luck Buddha.
Are you sure you would like to permanently delete the account "champa88"?